Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ ပျင်းခြင်းနှင့်ဥရောပနိုင်ငံနှစ်ခုမှစုံတွဲများအကြားတွင်လိင်စိတ်မတူကွဲပြားခြင်း (၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On
Erectile အလုပ်မဖြစ်, ပျင်းတာဟာနှင့်နှစ်ဦးကိုဥရောပနိုင်ငံများကနေစုံတွဲအမျိုးသားများအကြား Hypersexuality (2015)
comments: စစ်တမ်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် hypersexuality (လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲ) ၏အစီအမံအကြားခိုင်မာသောဆက်စပ်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ တချို့အကြောင်းပြချက်, ဒီ Stulhofer လေ့လာမှု erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဆက်စပ်မှု data တွေကိုချန်လှပ်။
Verena Klein Dipl. -psyche ။1, *, Tanja Jurin ပါရဂူဘွဲ့2,3, Briken MD Peer1 နှင့် Aleksandar Štulhoferပါရဂူဘွဲ့2
Volume ကို 12, ပြဿနာ 11, စာမကျြနှာ 2160-2167, နိုဝင်ဘာလ 2015
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) နှင့်ယခုမှတက်နိုင်သမျှလက်တွေ့သက်ဆိုင်ရာ hypersexuality အကြားအသင်းအဖွဲ့အပေါ်သုတေသနပြုတာသဘာဝကိုသာဖော်ပြရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
hypersexuality, ED နှင့် coupled အသိုင်းအဝိုင်းယောက်ျားတစ်နမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျင်းတို့တွင်ဆက်ဆံရေးစူးစမ်းဖို့ရည်ရွယ်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု။
အင်တာနက်-based စစ်တမ်းနှစ်ခုဥရောပနိုင်ငံများတွင်ကောက်ယူခဲ့သည်။ နမူနာ 911-Croatian နှင့် 210 ဂျာမန် coupled ယောက်ျားပါဝင်သည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းကိုပု Hypersexual Disorder စစ်ဆေးခြင်း Inventory, Erectile ရာထူးအမည်များ၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျင်းတာဟာစကေးဖွဲ့စည်း။ Poisson ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ED, တိုက်ပိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျင်း hypersexuality နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြပုံကိုဆနျးစစျဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
Aခရိုအရှေနှင့်ဂျာမန်အမျိုးသားများ Mong, hypersexuality သိသိသာသာ erectile function ကိုအတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျင်းနှင့်ပိုပြီးပြဿနာကျရောက်နေတဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်.
တချို့ယောက်ျားအတွက်, hypersexual အပြုအမူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဆင်းရဲမွဲတေမှု-ဆက်စပ်ပျင်းများအတွက်ဖြေရှင်းယန္တရားအဖြစ်အစေခံစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးအတွင်း ED တစ်ပြိုင်နက်ဒီအတူလိုက်ပါနိုင်ပါ။